Booliska federaalka oo beeniyey cabasho ay gaadiidlayda shabeelaha hoose ka muujiyeen isbaarooyin – Radio Daljir
Booliska federaalka oo beeniyey cabasho ay gaadiidlayda shabeelaha hoose ka muujiyeen isbaarooyin
Seteembar 21, 2013 2:35 b 0
Marka, September 21, 2013 – Gaadiidlayda gobolka shabeelaha hoose ayaa cabasho ka muujiyey isbaarooyin waa wayn oo dib loo dhigay jidadka isku xira Muqdisho ilaa gobolka shabeelaha hoose, arrintaas oo horay talaabo looga qaaday.
Taliska booliska dowladda federaalka ah ee Soomaaliya u qaabilsan gobolka shabeelaha hoose ayaa shaaciyey in aysan arintaas waxba ka jirin, isla markaasna la soo afjaray dhamaan isbaarooyinkii ooli jiray jidadka isku xira gobolka.
Cali Ibraahim Soomow Taliyaha qaybta booliska ee gobolka shabeelaha hoose waxaa uu sheegay in ay mar mar dhacdo isbaaro la dhigto wadooyinka gobolka, taas oo ah mid soo boodo ah oo aan markasta ka jirin gudaha gobolka, balse iyadana talaabo laga qaadayo.
?Waa jirtaa isbaaro soo boodo ah oo marmar la dhigo gobolka jidad ka tirsan, dadka ayaa lacag laga qaadaa markaas, laakiin maaha wax joogta ah sidii hore? ayuu yiri Col. Soomow
Madaxweynaha Soomaaliya xasan sheikh Maxamuud ayaa horay u amray in aan isbaaro lagu arki karin meelaha ay joogto dowladda Soomaaliya, waxaana taliyaha qeybta booliska ee shabeelaha hoose uu shaaca ka qaaday in ay haatan ciidamo rondo ah wareegaan wadooyinka gobolka si looga hortago isbaarooyinka.
Puntland oo joojisay howlihii shaqo ee xafiisyada iyo howl-wadeenada Tv-ga Universal ee gudaha
Soomaaliland iyo Ethiopia oo ka shiray soo celinta duulimaadkii Ethopian Air ee la hakiyey